निरङ्कुश बन्दै नेकपाको नेतृत्व ! | Sarathi News
May 6, 2019 | 6:38 am
काठमाडौँ, बैशाख २३– शनिबार बसेको सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकभित्रको माहोल अन्य दिनको भन्दा फरक थियो । विषय थियोे ‘मेरो सरकार’ । राष्ट्रपतिले बैशाख २० गते संसदमा पेश गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शब्दावलीका कारण सरकारको आलोचना भइरहेका बेला यो विषयले सत्तारुढ नेकपाकै संसदीय दलको बैठकमा समेत निकै आलोचना भएको हो ।
गत वर्ष पनि नेकपाका सांसदहरुलाई सरकारकै बारेमा जथाभावी नबोल्न भन्दै ओली र प्रचण्डले निर्देशन नै दिएका थिए । त्यही परिस्थिति नेकपामा अहिले पनि दोहोरियो । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली उल्लेख गरेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यही शब्दावलीलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
सांसद पाण्डेले छलफल गर्न नपाइने हो भने बैठक किन बोलाएको भन्ने प्रश्न गरे । सांसदहरुको आलोचना सुनेपछि बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले सांसदहरुले उठाएको विषय जायज भएको भन्दै गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भएका कमजोरी सच्याएर अहिलेको कार्यक्रम ल्याएको बताए थिए ।
प्रचण्ड बोल्दै गर्दा बैठक हलमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँ उठेका विषयका बारेमा जानकारी गराइयो । त्यसपछि लामो सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जस्तो भए पनि विपक्षीले विरोध गर्ने र सत्तापक्षले समर्थन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘कसैले औँला ठड्याउन ठाउँ छैन ।’ राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय हो । यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन ।’
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद झाँक्रीले नेतृत्वको हुकुमी शैली ठीक नभएको बताइन् । तानाशाही नेतृत्व भएपछि छलफल हुन्छ ? प्रधानमन्त्री कम्बोडिया गएपछि दलको बैठक बस्ने र त्यहाँ छलफल गर्ने भनिएको छ । शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबाट असन्तुष्ट नै भए पनि दलीय व्यवस्थाभित्र रहेको बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिजो राजतन्त्रका विषयमा फरक मत राखेर आइयो । यस्ता विषयमा आफ्ना मतहरु सुरक्षित छन् । चित्त नबुझेका कुरामा खुलस्त असहमतिहरु राख्दै आएको हो । आगामी दिनमा पनि राखिन्छ ।’
आफ्नै सरकारविरुद्ध संसद्मा असहमति दर्ज गर्ने प्रचलन नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गरेका कारण आगामी दिनमा सच्चिएर जानुपर्ने बताइन् । ‘दलको बैठकमा बोल्न नपाउने । फुल हाउसमा बोल्दा सरकारको समर्थनमा बोल्नुपर्ने । जङ्गबहादुरका रैती जस्ता भएका छन् सांसद ।’ त्यस्तै उनले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेरो सरकार भन्नु जायज नभएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो सरकार भन्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो । राष्ट्रपतिलाई त्यही दर्जा दिनुपर्छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
गतवर्ष सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संयमित अभिव्यक्ति दिन सांसदहरुलाई सचेत गराएका थिए । असार २ गते नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका जनता र प्रतिनिधिका सबै आवश्यकता र चाहना बजेटले समेट्न नसके पनि समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकारको बजेट सकारात्मक रहेको बताउँदै असन्तुष्टि भएमा संसद्मा नभई पार्टीमा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
ओलीले सङ्घीय संसदको मर्यादा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको मूल्य र मान्यतामा कायम रहँदै सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउमा आफ्ना अभिव्यक्ति केन्द्रित गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले सरकारको विरोध पनि गरेनन्, सरकारले गरेका कामको प्रचारमा पनि देखिएनन् । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा भएका त्रुटिहरु भविष्यमा छलफलमार्फत सच्याउँदै र थप्दै लैजान सकिने आश्वासन सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । रातोपाटीडटकममा खबर छ ।